Sida carruurtaada loogala hadlo lacagta Lacagta aragtida soogalootiga
Waxaa qoray Bright Musuamba – Isuduwaha Barnaamijka, Barwaaqo
Markii aan koray, marwalba waxaan dareemay inaan u malaynayo niyadda waalidkay markay tahay kahadalka lacagta. Dib-u-fiirin, waxaan u maleynayaa inay ahaayeen sida hufan sida ay moodeen inay noqon karaan laakiin, waan ogaa markii aan halgameynay waanna ogaa goorta aan si wanaagsan u shaqeyneyno. Mararka qaarkood waxay ahayd inaan qiyaaso markay ahayd \_”ok\_” inaan weydiisto lacag jeeb ah.
Fikradayda, amniga maaliyaddu aad ayey muhiim ugu tahay qoysaska inay ka hadlaan. Lacagta ayaa qeyb ka ah wadahadalka laakiin ma ahan wada hadalka oo dhan! Wadaagista qorshooyinka maaliyadeed iyo ujeedooyinka wadajirka ah waxay kobcin kartaa ixtiraam iyo kalsooni. Waxay ku dhiirrigelin kartaa qof walba inuu ka wada shaqeeyo sidii riyada looga dhabayn lahaa.
Waxaan u maleynayaa inay jiraan 3 waxyaalood oo qoysaska iyo dhalinyarada waaweyn ay tahay inay ku tababartaan ka wada hadalka si ay u bilaabaan dhismaha amniga dhaqaale.
Waxaan u baahannahay inaan ka shaqeyno sidii meesha looga saari lahaa dhaleeceynta ka dambeysa wadahadalka dhaqaale ee u dhexeeya waalidiinta iyo carruurta. Waalidiinta, inaad kala hadashaan caruurtiina arrimaha lacagta micnaheedu maahan inaad idinku ku mashquulineysaan walwalka dadka waaweyn! Kaliya waxay ka dhigan tahay inaad tixgeliso iyaga oo aad rabto inaad ku darto mawduucyo ay ku jiraan oo saameynaya qoyska oo dhan.
2. Carruurta, fiiro gaar ah u yeelo, u hamuun qaba inay wax bartaan, oo su’aalo weyddiista! Mararka qaar anaga dhallinyarta ah waxaan u muuqannaa jaahilnimo oo aanaan dan ka lahayn in aan ku lug yeelano arrimo aan u aragno inay yihiin \_”dadka waaweyn oo keliya. ‘Maya! Ka hadalka arrimaha aan u aragno inay \_”adag yihiin\_” ayaa naga caawin kara mustaqbalka fog. Waalidiinteyda ayaa i baray xirfado aad u faa’iido badan oo aan sii adeegsanayo maanta. Waxay i bareen sida loo qorsheeyo miisaaniyadda, sida loo kaydiyo, iyo qiimaha lacagta adag lagu kasbado. Xirfadahani waxay na siinayaan bood bood, gaar ahaan maal-gashiga maanta.
3. Waalidiin, ku dadaal inaad barataan oo aad bartaan carruurtaada xirfadaha dhaqaale! Soogalooti ahaan, waxaan u nimid Mareykanka waana inaan bilownaa wax walbana aan waxbadan ka baranaa meel hoose. Waa inaan baranno nidaamka amaahda, dhisno taariikh amaah ah oo aan raadino raadad maaliyadeed oo wanaagsan si aanan ugu dhicin deyn aad u xun iyo go’aanno dhaqaale. Waxaan helay digniinta caanka ah ee ah in \_”lacagtu aysan ku korin geedaha\_” si joogto ah sidaa darteed waxaan ku ogaa yaraantiina in lacagtu muhiim tahay. Xorriyadda maaliyadeed ayaa iigu dambaysa.
Dhawaan, waxaan qaatay kedis si aan u ogaado shakhsiyadayda lacagta waxaan helay \_”Keydiyaha\_” oo aan moodayay inuu aad u saxan yahay. Waad ku mahadsantahay saameynta waalidkey, waxaan ahay qof ay aad uga dhab tahay badbaadinta lacagteyda, qorsheynta mustaqbalka, iyo inaan ku kalsoonaado dhaqaalaheyga. Sifooyinkaas awgood, qoyskeygu waxay barteen inay igu tiirsanaadaan inkasta oo aan ahay kan ugu dambeeya.
Way ogyihiin inay igu kalsoonaan karaan inaan xoogaa lacag haysto, ama aan maal gashado lacagtooda, ama haddii ay kaliya doonayaan inay ka hadlaan lacagta. Waan ku faraxsanahay kuna faraxsanahay inaan awood u leeyahay inaan ku taageero qoyskeyga habkaas, qaasatan sida qaangaarka dhalinyarada ah iyo soogalootiga Aqoon kasta oo dhaqaale oo aan helo, waxaan la wadaagayaa qoyskeyga si aan u wada korno una wada horumarinno. Waxaan ku leenahay karti badan gudaha waana gaari karnaa oo aan gaari karnaa waxyaabo badan oo waawayn hadii aan ku riixno barashada iyo wadaagida macluumaadka aan helno. Dhaqaalaha maahan inay naga nixiyaan ama na cabsi geliyaan laakiin taa bedelkeeda, waa in dhaqaalahu ay nagu dhiirrigeliyaan oo nagu riixaan inaan horay u sii socono oo nagu dhiirrigeliya inaan riyoodo wax weyn. Wax walba waa suurtagal haddii aynaan isku koobin!
Ku saabsan Qoraaga Bright waa hooyo reer Congo ah oo u guurtay Lewiston 5 sano ka hor iyada iyo qoyskeeda. Bright waxay ku hadashaa seddex luuqadood waxayna aad ujeceshahay awoodsiinta, waxbarida iyo kor uqaadida shaqsiyaadka shaqooyinka ay ka qabato BarwaaqadaME. Bright waxay dareemeysaa inay sifiican ugu sharaxday oraahda ka timid Maya Angelou, oo aqrinaysa, “Hadafkeyga noloshu maahan oo keliya inaan badbaado, laakiin inaan barto iyo inaad sidaa ku sameysid xoogaa dareen, naxariis, qosol, iyo qaab uun!
Si aad wax badan uga ogaato barnaamijyadeena awoodsiinta dhaqaalaha, fadlan la xiriir Bright [email protected]
PreviousDaboolida Qiimaha La Xiriira Dhalmada
NextDaryeelka caruurta ee mareykanka